Umkhiqizi Nomhlinzeki We Solar Panel wase China | Xinneng
Sekuyiminyaka engaphezu kwengu-10 sikhiqiza amakhwalithi asebenza ngelanga asezingeni eliphakeme athengisiwe emhlabeni wonke.
Amapaneli ethu enziwe ngengilazi emnene enokukhanya okuphezulu kokukhanya, i-EVA, iseli elanga, indiza yangemuva, i-aluminium alloy, ibhokisi lokuhlangana, ijeli le-Silica.
Siqinisekisa amapaneli ethu iminyaka engama-25.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa eYurophu, eMpumalanga Ephakathi, e-Afrika, eNingizimu Melika nakwamanye amazwe ase-Asia.
Amaseli elanga, aziwa nangokuthi "ama-solar chips" noma "ama-photocell", angamashidi we-photoelectric semiconductor amashidi asebenzisa ukukhanya kwelanga ukukhiqiza ugesi ngqo. Amaseli elanga awodwa awakwazi ukusetshenziswa ngqo njengemithombo yamandla. Njengomthombo wamandla, amaseli amaningi elanga elilodwa kufanele axhunywe ochungechungeni, axhunywe ngokufana futhi avaleke ngokuqinile ezintweni.
Amapaneli elanga (abizwa nangokuthi amamojula eseli elanga) ahlanganiswa ngamaseli amaningi elanga, okuyingxenye eyinhloko yohlelo lwamandla elanga nengxenye ebaluleke kakhulu yohlelo lwamandla elanga.
Ukwakhiwa kwephaneli lelanga nemisebenzi
(1) Ingilazi enomoya omnene: Umsebenzi wayo ukuvikela umzimba omkhulu wokukhiqizwa kwamandla (njengeseli), futhi ukukhethwa kokudluliswa kokukhanya kuyadingeka: Ukudluliselwa kokukhanya kufanele kube phezulu (imvamisa kungaphezulu kwama-91%); ukwelashwa okumhlophe okumhlophe.
(2) EVA: Isetshenziselwa ukubopha nokulungisa ingilazi enomoya nomzimba omkhulu wokuphehlwa kwamandla (iseli).
(3) Amaseli: Umsebenzi omkhulu ukukhiqiza ugesi.
(4) Indiza yangemuva: Umsebenzi, ukubekwa uphawu, ukuvikela nokuvikela amanzi.
(5) Ingxubevange ye-Aluminium: vikela i-laminate, udlale indima ethile yokubeka uphawu nokusekela.
(6) Ibhokisi leJunction: vikela lonke uhlelo lokukhiqiza amandla futhi usebenze njengesiteshi sokudlulisa samanje.
(7) I-silica gel: umphumela wokufaka uphawu
Amapaneli ethu elanga ahlukaniswe ngamapaneli welanga e-monocrystalline silicon kanye ne-polycrystalline silicon solar panels. Ukusebenza kahle kokuguqulwa kwesithombe se-monocrystalline silicon solar panels kuphakeme kunalokho kwamapaneli welanga e-polycrystalline silicon. Amandla we-voltage ne-wattage wepaneli yelanga kungenziwa ngezifiso, imvamisa kusuka ku-5watt kuye ku-300watt. Intengo yamapaneli elanga ibalwa nge-watt ngayinye.
Izinhlobo zamapaneli welanga
Ukusebenza kahle kokuguqulwa kwesithombe se-monocrystalline silicon solar panels kumayelana ne-15%, kanti okuphezulu kakhulu ngama-24%. Lokhu ukusebenza kahle kakhulu kokuguqulwa kwesithombe sombane kuzo zonke izinhlobo zamapaneli elanga, kepha izindleko zokukhiqiza zinkulu kakhulu ukuthi ngeke zisetshenziswe kabanzi futhi zisetshenziswe kabanzi. Ukusebenzisa. Njengoba i-monocrystalline silicon ivame ukufakwa ngengilazi eqinisiwe nocingo olungangeni manzi, iyahlala futhi inempilo yesevisi efinyelela eminyakeni eyi-15, futhi kuze kube yiminyaka engama-25.
Iphaneli yelanga yePolycrystalline silicon
Inqubo yokukhiqizwa kwamapaneli welanga e-polycrystalline silicon iyafana neye-monocrystalline silicon solar panels, kepha ukusebenza kahle kokuguqulwa kwesithombe se-polycrystalline silicon solar panels kumele kuncishiswe kakhulu, futhi ukusebenza kwayo kokuguqulwa kwesithombe kungama-12% (ngoJulayi 1, 2004 , Ukusebenza kahle kweJapan Sharp ngu-14.8%. Iphaneli elisebenza kahle kakhulu yelanga ye-polysilicon). Ngokuya ngezindleko zokukhiqiza, kushibhile kune-monocrystalline silicon solar panel, okubalulekile kulula ukukhiqiza, konga ukusetshenziswa kwamandla, futhi izindleko zokukhiqiza seziphansi, ngakho-ke kuthuthukiswe inani elikhulu. Ngaphezu kwalokho, impilo yensiza yamapaneli welanga e-polycrystalline amafushane kunaleyo yama-solar monocrystalline silicon. Ngokuya ngokusebenza kwezindleko, ama-solar monocrystalline silicon solar angcono kancane.
Amaseli Ama-Poly 60 Aphelele
Amandla amakhulu ku-STC (Pmax)
I-Optimum Operating Voltage (Vmp)
I-Optimum Operating Current (Imp)
Vula i-Circuit Voltage (Voc)
Okwamanje Isekethe Yesikhashana (Isc)
Ithempelesha yokusebenza ye-Module
-40 ° C kuye ku- + 85 ° C
Ubuningi System Voltage
I-1000/1500 V DC (IEC)
Isilinganiso se-Fuse Maximum Series
Isimo Esivamile Sokuhlola (STC)
i-lrradiance 1000 W / m 2, izinga lokushisa le-module 25 ° C, AM = 1.5; Ukubekezelelana kwe-Pmax, i-Voc ne-Isc konke kungaphakathi kwe- +/- 5%.
Amaseli Ama-Mono 60 Aphelele
Isimo Esijwayelekile Sokuhlola (STC) lrradiance 1000 W / m 2, izinga lokushisa le-module 25 ° C, AM = 1.5; Ukubekezelelana kwe-Pmax, i-Voc ne-Isc konke kungaphakathi kwe- +/- 5%.
Izithombe Zokukhiqizwa Kwefektri
Langaphambilini Thula Uhlobo Generator
Olandelayo: Trailer Uhlobo Generator
Ama-Solar Panels ayi-100w
Amaphaneli welanga angama-300 Watt
Iphaneli yelanga 300w
Uhlelo Solar Panel